चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउँदै, आइतबार सार्वजनिक बिदा - देश विकास डटकम
२४ असोज २०७६, शुक्रबार ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजकीय भ्रमणको अवसरमा सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीको राजकीय भ्रमणको दोस्रो तीन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताउनुभयो ।
चिनियाँ रााष्ट्रपति सी शनिबार चार बजे नेपाल आइपुग्दैछन् । यसअघि नै सरकारले २०७३ कात्र्तिकमा भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुखको राजकीय भ्रमणको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गरेको मन्त्रीको भनाइ छ ।
दुई दशकपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका अवसरमा नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारी हुने तयारी छ ।
राष्ट्रपति चिनफिङ असोज २५ र २६ गते नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आउने छन् । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुनेछ । सँगै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको लगानीको ढाँचाबारेमा समेत छलफल गरिने छ ।
← चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा उच्चस्तरीय सुरक्षा
सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस भोटसिपा तिखु मोडमा दुर्घटना, ८ जनाको मृत्यु →
लकडाउन खुकुलाे : एक जिल्लावाट अर्काे जिल्लामा जान पाइन्छ ?
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:४५ Saroj Poudel 0
१८ बैशाख २०७६, बुधबार १९:०५ Bharat Regmi 0
रानीपोखरीमा तीन करोड स्वाहा !
२३ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०८:४१ Saroj Poudel 0